ဆေးကုသမှု ခံယူနရေတဲ့ လကျရှိအခွအေနကေို ပရိသတျတှကေို ပွောပွလာတဲ့ မခေလာ – စှယျစုံသုတ
ဆေးရုံရောကျသညျအထိ ဆေးကုသမှု ခံယူနရေတဲ့ လကျရှိအခွအေနကေို ပရိသတျတှကေို ပွောပွလာတဲ့ မခေလာ
ခဈြငယျလို့ အားလုံးကခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ အဆိုတျောမခေလာကတော့ တဈခတျေတဈခြိနျထဲက သီခငျြးတှလေညျးဆိုသလို ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှောလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈလို့ စှယျစုံရတဲ့ဝါရငျ့အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ။ဒါ့အပွငျ သာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပါသေးတယျ ။
ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့စုံတှဲလေးကို အရမျးအားကကြွသလို ခဈြငယျရဲ့ပှငျ့လငျးတဲ့ပွောဆိုပုံလေးတှနေဲ့စိတျထားဖွူစငျပုံလေးတှကေို ခဈြနကွေတာပါ ။ အလှူအတနျးဆိုရငျလညျး အမွဲ ရှဆေုံ့းကနေ ပါဝငျလှူဒါနျးလကျြရှိတာကိုလညျး လေးစားစှာတှရေ့ပါတယျ ။
ဒီနမှေ့ာတော့ မခေလာက ကနျြးမာရေး မကောငျးမှနျတာကွောငျ့ ဆေးရုံတကျ ကုသနခေဲ့ရကွောငျး ပရိသတျတှကေို အသိပေးပွောကွားလာပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ခုလကျရှိမှာတော့ ပွနျလညျကောငျးမှနျလာပွီဖွဈတယျလို့ သတငျးကောငျးလေးဆိုလာပါတယျ ။
” အားလုံးရဲ့မတ်ေတာကွောငျ့ ခဈြငယျကနျြးမာလာပါပွီ! မခေလာ ပွနျလာမယျနျော! အားပေးမှာလား?! မခေလာ လာပွီလေ…! Fighting ပရိတျသတျတို့….” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
ဆေးရုံရောက်သည်အထိ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ မေခလာ
ချစ်ငယ်လို့ အားလုံးကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော်မေခလာကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ချိန်ထဲက သီချင်းတွေလည်းဆိုသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ စွယ်စုံရတဲ့ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ဒါ့အပြင် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ် ။
ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့စုံတွဲလေးကို အရမ်းအားကျကြသလို ချစ်ငယ်ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ပြောဆိုပုံလေးတွေနဲ့စိတ်ထားဖြူစင်ပုံလေးတွေကို ချစ်နေကြတာပါ ။ အလှူအတန်းဆိုရင်လည်း အမြဲ ရှေ့ဆုံးကနေ ပါဝင်လှူဒါန်းလျက်ရှိတာကိုလည်း​​ လေးစားစွာတွေ့ရပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာတော့ မေခလာက ကျန်းမာရေး မကောင်းမွန်တာကြောင့် ဆေးရုံတက် ကုသနေခဲ့ရကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးပြောကြားလာပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ခုလက်ရှိမှာတော့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ သတင်းကောင်းလေးဆိုလာပါတယ် ။
” အားလုံးရဲ့မေတ္တာကြောင့် ချစ်ငယ်ကျန်းမာလာပါပြီ! မေခလာ ပြန်လာမယ်နော်! အားပေးမှာလား?! မေခလာ လာပြီလေ…! Fighting ပရိတ်သတ်တို့….” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
သငျ့ရခြေိုးခနျးထဲမှာ မထားသငျ့တဲ့ ပစ်စညျး (၇)မြိုး